कांग्रेसका चारमध्ये दुई तारा खोज्दै सरकार !
काठमाडौँ - सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले कांग्रेसका ४ मध्ये २ तारा खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बास्कोटाले शान्तिको र लोकतन्त्रको तारा खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका हुन् ।
'सत्ता गुमेपछि कांग्रेसले शान्तिपूर्ण राजनीतिमै धावा बोल्न खोजेको छ,' बास्कोटाले कांग्रेसलाई आरोप लगाउँदै भने, 'हिँसा प्रति कांग्रेसको धारणा के हो ? हामीले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई हिँसाका बारेमा सिकाउने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको चार तारा मध्ये एक शान्तिको तारा एक लोकतन्त्र वा स्वतन्त्रताको तारो कहाँ गयो खोज्नुपर्ने हुन्छ ।'
बास्कोटाले कांग्रेसलाई 'दिनभरि बीपी रातभरी विप्लव' गरिरहने हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । 'हिँसा र निषेधको राजनीतिलाई प्रश्रय दिने कांग्रेस दिनभरि वीपी, रातभरि विप्लव हो ?' उनले प्रश्न गरे ।
बास्कोटाले विप्लव समूहले कहिले दरबारका नाममा, कहिले कांग्रेसका नाममा र कहिले एमालेका नाममा नेपाली राजनीतिमा खेलिरहेको तत्कालीन माओवादीको पुरानो विरासत सम्हालेको आरोप लगाए । 'यसरी जाने कुरा त विप्लव समुहले जानी मानी आएको, सिकेर आएको कुरा हो,' बास्कोटाले भने ।